APC EMEWALA ỤMỤ NAIJIRIA OBI – Bishọp Ezeọfọ – hoo!haa!!
Bishọp ụka Nglikan na Dayọsis Agụata bụ Rt. Rev. Samel Ezeọfọ akpọọla oku ka ụmụ Naijiria gbarapụ otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị ‘All Progressive Congress’ (APC) na nhọputa nke afọ puku abụọ na iri na itolu na-abịa abịa, n’ihi na otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị ahụ emewala ụmụ Naijiria obi n’ime afọ anọ ọ nọgoro n’ọchịchị.
Bishọp Ezeọfọ kpọrọ oku a n’ụlọ ụka ukwu ndi Nglịkan nke Jemis dị asọ, n’Atanị bụ isi Dayọsis Nglịkan nke Ọgbaru. O kwuru nke a n’emume ejiri kpọlite Rt. Rev. Prọspa Ama, dịke nnukwu ụkọchukwu (bishọp) nke dayọsis Ọgbaru.
Bishop Ezeọfọ sị na Naijiria ga-aga n’ihu naanị mgbe o nwetera ezigbo ndi ndu.
Ọ sị na ihe dị mkpa ugbu a bụ ka ndi ndọrọ-ndọrọ ọchịchị legharịa anya, mara otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị ga-eme ka Naijiria gawa n’ihu ma banye n’ime ya.
N’okwu ya, APC eduhachila anyị azụ nke na ihe dị mkpa ugbu a bụ ụmụ Naijiria ịhapụ otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị APC, bụ nke ọ sịrị na ọ gaghị ewetara anyị ọganihu, ma banye nke ga-eme ka anyị gawa n’ihu. Ọ sị na Naijirịa ga-agarịrị n’ihu n’ihi na Naijiria karịrị onye ọbụla dịka otu onye maọbụ APC dịka otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị.
Bishọp Ezeọfọ gwara bishọp Ama dịka onye na-ewere ọkwa ọrụ n’aka ya, ka ọ gbaa mbụ hụ na ọ rụpụtara ọrụ karịa ya n’onwe ya na-apụ apụ, site na-irụchapụ ọrụ ndi ya ji n’aka nakwa ime ka ndi kwere ekwe nke ụka ahụ gawanye n’ịhu ịmara Chineke.
Mgbe ọ na-achịnye bishọp Ama igodu ụgbọ-ala mkpori ndụ ‘Toyota SUV’ nke ndi kwere ekwe nke ụlọ ụka ahụ zụtara ya, ka nnukwu ode akwụkwọ nke dayọsis Nglịkan Ọgbaru bụ nnukwu oka-ikpe Pete Obiọra gwara bishọp Ama na ha ji obi sara mbara alabata ya, ma nwee olile anya na ọ ga-abụrụ ha ezigbo onye nche atụrụ ga-edugara ha Chineke.
Obiora toro bishọp Ezeọfọ bụ onye nke ọ sị na ọrụrụ ezigbo ọrụ dịka bishọp mbụ nke dayọsis Ogbaru, site n’ife Chukwu na ndi mmadụ nke ọma. O kwuru na-enwere olile anya na ọ ga-arụkwa ụdịrị ezigbo ọrụ ahụ n’ebe nke ọ na-aga ugbu a, bụ dayọsis nke Agụata.
Previous Post: EGWU (FEAR)/EGWU (MUSIC/PLAY)
Next Post: STEETI ENUGWU: EGWU NDI FULANI EJIDELA NDI NENWE